Frontier Myanmar မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသော Mr. GRIFFIN HOTCHKISS ၏ ဆောင်းပါးကို ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ ဤပို့စ်သည် မူရင်းပို့စ်နှင့် လွဲချော်ပြီး မှားယွင်းသည်များ ရှိပါက ဘာသာပြန်သူ၏ မှားယွင်းမှုသာ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန် မြို့လည်ကောင်က ဖန်တီးရာ မှာ ကျင်းပတဲ့ နည်းပညာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ Michael Suantak က ဇွဲနဘဲ ကြီးစွာ ပြောဆို ဆွေးနွေးနေသည်။ "သူတို့တွေ လူတွေကို မလှည့်စားသင့်ဘူး။ သူတို့ အနာဂါတ်ကို မလှည့်စားသင့်ဘူး" လို့ Mr. Suantak က ပြောနေသည်။ "သူတို့တွေ အခုလောလောဆည်တော့ အရမ်း လူသိများနေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက် လေး၊ ငါးနှစ်နေလို့ လူတွေအားလုံး ဒါကိုသိသွားရင်၊ လူတွေ အရမ်း စိတ်ဆိုးကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထိန်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။" ဟု သူက ဆက်ပြောတယ်။ ဒီစကားကို ကြားရတဲ့ ခဏမှာ သင့်အနေနဲ့ သူ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒါမှမဟုတ် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှာ တာဝန်လွှဲပြောင်းယူမယ့် အစိုးရသစ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေအကြောင်းကို သူ ဆွေးနွေး ပြောဆိုနေတယ်လို့ ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Mr. Suantak ပြောနေတာက ကွန်ပျူတာမှာ သုံးတဲ့ ဖောင့် (font) တစ်ခုအကြောင်းကို ပြောဆိုနေခြင်းပါ။ တကယ်တော့ ဖောင့်(fo
Adobe Illustrator CC 2019 မှာ မြန်မာယူနီကုဒ်အတွက် အထောက်အပံ့ပါလာပါပြီ။ Font option ထဲက Language မှာ Burmese ဆိုပြီး ပါလာပါတယ်။ Adobe CC 2019 မှာ ယူနီကုဒ်နဲ့ စာရိုက်နိုင်ဖို့ Edit>>Preference>>Type>>Show Indic Option ကို ရွေးပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် Paragraph option ထဲက Middle East & South East Asia Inline Composer/EveryLine Composer ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ Adobe မှာ Unicode support ရအောင် ကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့သူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ https://helpx.adobe.com/illustrator/using/asian-scripts.html ဒါကတော့ MacOS မှာပြထားတာပါ။
By Htet Wai Aung - March 14, 2019
ယူနီကုဒ်နဲ့ဇော်ဂျီ ပြဿနာကြား ခေါင်းစားနေရတဲ့ developer တွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် developer tools လေးတွေစုပေးထားတာပါ။ MMText Technomation ကနေ free ပေးတဲ့ Android devices တွေမှာ Myanmar Unicode ကို embedded လုပ်ဖို့ library တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို GitHub မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ https://github.com/htoomyintnaung/mmtext Kanaung Converter ZawgyiOne to Unicod, Unicode to ZawgyiOne အပြန်အလှန်ပြောင်းလို့ရတဲ့ php converter ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို GitHub မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ https://github.com/kanaung/converter Rabbit Converter Web နဲ့ Android တွေအတွက် သုံးလို့ရတဲ့ ကိုစေတန်ရဲ့ lib တစ်ခုပါ။ အသေးစိတ်ကို GitHub မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ https://github.com/Rabbit-Converter/Rabbit Rabbit converter ကို တခြား programming language တွေနဲ့ရေးထားတာတွေလည်း သူ့ github မှာရှိပါသေးတယ်။ https://github.com/Rabbit-Converter MMUni Press Wordpress ဆိုဒ်တွေမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးရေး ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးရေး ဘာနဲ့ရေးရေး ရေးလို့ရပြီး ကြည့်တဲ့သူ ဘက်ကလည်း ဘာနဲ့ကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားတဲ့ Wordpress plug in
(၁) ပြည်ထောင်စုဖောင့် ဆိုတာ ဘာလဲ? ပြည်ထောင်စုဖောင့် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ဖောင့် အမျိုး အစား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဖောင့်သည် ယူနီကုဒ်စနစ် (Unicode) ကို လိုက်နာထားသည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယူနီကုဒ် ဆိုသည် မှာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော အက္ခရာစာလုံးများ အတွက် မည် သည့် Platform တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် Program တွင် ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ဘာသာစကား Language တွင် ဖြစ်စေ အက္ခရာတစ်ခုချင်းစီကို သီးခြား သတ် မှတ်ပေးထားသည့် ကုဒ်နံပါတ်များဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ် ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာတွင် အသုံးပြုသည့် စကားများအားလုံးမှ အက္ခရာစာလုံး တစ်လုံးတိုင်းအတွက် တိကျသော နံပါတ်တစ်လုံးတည်းသာ သတ်မှတ်ပေးထားသော ဘုံသုံး စံ စနစ် ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ . (၂) Myanmar3နဲ့ ဘာကွာခြားသလဲ? ထိုသို့သော ယူနီကုဒ်စနစ်ကို လိုက်နာရေးသားထားသည့် ပြည်ထောင်စုဖောင့် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်သည် ယခင် Myanmar3ဖောင့် ကို အဆင့်မြှင့်ထားသည့် ဖောင့် ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (Myanmar4ဟု မခေါ်တွင်ဘဲ ပြည်ထောင်စုဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်) ။ ပြည်ထောင်စုဖောင့်တွင် ယခင် Myanmar3ဖောင့် နှင့် အဆင်မပြေ မကိုက် ညီသည့် ကွန်ပျ